Indlu enhle engaphambi kwechibi, iLake Champlain - I-Airbnb
Indlu enhle engaphambi kwechibi, iLake Champlain
336 okushiwo abanye
Highgate, Vermont, i-United States
I-Lakefront cottage etholakala e-Highgate Springs, e-Vermont, emngceleni waseCanada. Ikotishi elinamagumbi amabili okulala lihlala eduze kwendlu enkulu ehlala umnikazi, endaweni enkulu eyihektare eyodwa, enezinyawo eziyi-120 zogu logu lweLake Champlain. Jabulela ukubukwa okumangalisayo kokushona kwelanga ngenkathi uhlezi emphemeni obheke emanzini. Idokodo eliyimfihlo lifakiwe. I-Montreal neBurlington ngayinye imizuzu engama-45 ukusuka lapho. Ishaja yemoto enguleveli 2 etholakalayo. Izilwane ezifuywayo eziziphethe kahle zivunyelwe. I-WIFI eshesha kakhulu!
Ukubhukuda, izinhlanzi, isikebhe, i-ski, ibhayisikili (i-Misisquoi Rail-Trail iseduze kakhulu, ne-Burlington Bikeway nje eningizimu). Ihora lokushayela ukuya e-Jay's Peak resort. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezisedolobheni eliseduze lase-St. Albans, noma udle ezindaweni zokudlela ezisezingeni lomhlaba e-Burlington noma e-Montreal. Qaphela: Ngo-August nango-September, njengamachibi amaningi anamanzi ahlanzekile, kungase kube khona ulwelwe. Izinja kufanele zigcinwe egcekeni elibiyelwe, njengoba ulwelwe luyingozi kuzo. Ukubhukuda e-Alburg Dunes State Park, lapho ichibi lijule kakhulu, kungaba inketho enhle ngasekupheleni kwesizini yehlobo.
4.98 · 336 okushiwo abanye
Nazi izincomo zami siqu: airbnb.com/rooms/23560755/guidebook
Ngilapha ngenxa yakho ngesikhathi uhlala, kodwa izinga lethu lokusebenzisana likuwe. Ngishayelwa ucingo/umlayezo kuphela. Uzokwazi ukuzihlolela wena lapho ufika.